Gaa na Obí nke Versailles | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | Nduzi, Paris
You na-agagharị Francia a mmiri na ị chọrọ ileta ebube Obí nke Versailles? Will gaghị akwa ụta, mana ọ bụ eziokwu na ọ bụ njem mmụta kwesịrị ka a hazie ya na nke ị ga-arara ee ma ọ bụ ee ụbọchị niile.
Palacelọ eze buru ibu ma ọ bụghị n'akụkụ nkuku, ya mere gụọ isiokwu anyị taa ka ị nwee ike ịhazi nleta gị nke ọma, hapụ ihe ọ bụla na pipeline ma nwee ọ enjoyụ zuru ezu na nleta nke a, otu n'ime ụlọ ndị mara mma nke ụwa.
1 Obí nke Versailles
2 Gaa na Obí nke Versailles
Obí nke Versailles
The Château de Versailles amughi dika obí eze mana dika a ịchụ nta ná mpụga Paris. Ọ bụ ọdịnihu Louis nke Iri na Atọ chọtara ọmarịcha ebe a n'aka nna ya, Henry nke Anọ. Oge ụfọdụ ka e mesịrị, na 1623, o kpebiri iwu ụlọ ndò nke sitere na nnukwu ụlọ nke taa.
Otú ọ dị, eze a kacha mara amara na Versailles bụ Louis nke Iri na Anọ. Onye bu gbasapụ ya, chọọ ya mma ma mee ka ọ bụrụ saịtị dị ebube anyị na-ahụ taa, ebe ntụrụndụ dị ọcha mara mma nke nwere ogige mara mma ma saa mbara. N’ebe ahụ ka eze rụnyere ụlọikpe na isi ọchịchị nke alaeze ya. Mgbe ọ nwụrụ, a na-ahapụ ọrụ ndị ahụ ma ọ bụ nwa nwa ya, bụ Louis XV, na-eburu ha ọzọ, ọ bụ ezie na ọ na-ahọrọ iji mesie obere na ebe nzuzo ọ bụghị ebe ọha mara mma.
Ya mere, anyị na-abịa Louis nke Iri na Isii, eze gbara obere afọ iri abụọ, mechara lụọ Marie Antoinette. Ọ nọrọ ọtụtụ oge na Versailles na nwunye ya mere Petit Trianon ebe obibi ha. Anyị amatala ihe mechara mee, mgbanwe ndị France na ogbugbu ya. Ọ dabara nke ọma, obí ahụ lanarịrị oge ọgba aghara a na akụkọ ntolite France na-enweghị oke mmebi. N'ezie, ọ funahụrụ ya arịa ụlọ ya na ọrụ nkà ya.
Ka oge na-aga, gọọmentị ọhụrụ nyefere ụlọ ọrụ eze iji bụrụ ụlọ nkwakọba ihe na ebe ngosi ihe mgbe ochie. Napoleon anaghị eji ya ma si otú a, obí ahụ na-agagharị na mmiri dị jụụ ruo narị afọ nke XNUMX. N’ebe a ka edere Nkwekọrịta Udo nke 1919, nke mechiri Agha Worldwa Mbụ, ọ bụkwa n'oge narị afọ ọhụrụ ka ọ na-enwu ọzọ wee bụrụ isi ụlọ ọrụ nke nleta ndị isi. N'ime iri afọ iri iteghete ọrụ mgbanwe malitere na ịgbatị n'ime 90st narị afọ.
Eziokwu bu na ngalaba nke Versailles, ala dum, nwere ihe karịrị hekta 800, na n’agbata ubi na ime ime ya, nleta na-ewe otu ụbọchị. Gaba.
Can nwere ike ịga njem ma ọ bụ naanị gị. A garala m ụgbọ oloko ma ọ dị nfe. Tragbọ oloko atọ nwere ike iburu gị mana ọdụ kacha nso na nke kacha ewu ewu bụ Château Rive Gauche. RER C rutere n'ọdụ a na nnukwu ụlọ bụ nanị ije ije 10 nkeji. Ma ọ bụghị na ị nwere ike were ụgbọ oloko SNCF site na Mont Pparnasse wee pụọ na ọdụ Versailles Chantiers na nnukwu ụlọ 20 nkeji ma ọ bụ njem site na Saint Lazare ruo Versailles Rive Droite ma jee ije karịa ma ọ bụ karịa.
N'ihu ọdụ ụgbọ oloko ahụ, ugbua na Versailles, na Château Rive Gauche, enwere ụlọ ọrụ ndị njem nleta ebe ị kwesịrị ịzụta tiketi ụlọ. Ọ ka mma ịkwado ebe ahụ karịa na nnukwu ụlọ yabụ ndụmọdụ m bụ ichere ọbụlagodi na enwere ndị mmadụ. Zọ mbata nke obí eze bụ site na Court of Honor. Paspọtụ ahụ na-efu euro 20 ma gụnye nnweta na ngalaba ahụ dum: nnukwu ụlọ ahụ nwere ndu ọdịyo gụnyere, Trianon, ihe ngosi nwa oge, ogige na ubi, Musical Gardens and the Coaches Gallery.
La ọnụ ụzọ nke nnukwu ụlọ naanị na-efu 18 euro na e nwekwara a paspọtụ na ndoputa oge na euro 20 na a paspọtụ ụbọchị abụọ ruo 15 euro. Akwụkwọ tiketi Domaine de Trianon na-efu euro 12 na Passport ụbọchị abụọ + El Camino del Escudero show na-akwụ ụgwọ euro 2. Na abanye n'ubi egwu Ọ na-efu euro 8, nleta abalị na euro 50 na ọnụ ụzọ nke nnukwu ụlọ + nleta nke Equestrian Academy nke Versailles na-efu euro 26.
Dị ka ị hụrụ ụdị tiketi dị iche iche ma ihu ọma, ma ọ bụrụ na ị na-aga na-aga naanị, dum paspọtụ adaba. ¿Enwere njem njegharị? Eeh, e nwere ọkà okwu si n’obí eze wee nye gị igwe okwu dịka enyere gị ụfọdụ oghere ndị anaghị ewu ewu. Achọrọ ndoputa ma ọnụahịa ya bụ euro 10 tinyere ego mbata.
Agara m n'onwe m ma, n'ọnwa Ọktọba, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ awa abụọ na-eche. Ozugbo n'ime m nwere onwe m ịbịa ma laa dịka m masịrị m. Ọ dị mfe ịmara usoro nke isi mmiri n'ihi na ọ bụrụ na ị nọ n'ime obí eze, ị ga-atụ uche ha. Ozugbo ị banyere, ị ga-ekpebi ma ịchọrọ ịmalite na ubi ma ọ bụ n'obí ya.
Na na ogige ntụrụndụ na ubi, mmiri bụ onye bụ isi sekpụ ntị, n'isi iyi, iyi na iyi mmiri. Bụ Osimiri Neptune, na Efere dragon, las Isi mmiri anọ na mara mma Animal kaboodu. Kwesịrị ị na-eleta ndị Obodo ndi eze nwanyi n'ime ubi nke Trianon. ya na ngalaba ya ato na igwe ihe ubi, ugbo na ulo ndi ozo ndi eze nwanyi ji agafe ma umuaka ya egwu egwu.
A na-eji isi mmiri na ihe oyiyi chọọ ụlọ nsọ mma, obere ogige na ọhịa ma na-aga ije. Ọ bụ Arboleda de la Reina, ya na labyrinth a ma ama jupụtara na isi iyi, Arboleda del Salón de Baile, nke dị ka amphitheater nwere ọwa mmiri na akwa mmiri, Arboleda de las Columnas na Arboleda de los Castaños mara mma, n'etiti ndị ọzọ. Enwekwara nnukwu uzo ato ma obu ebe ozo, n'ebe ugwu, ndida na mmiri parterre. Ndị a bụ nnukwu bekee nwere akụkụ anọ nke na-egosipụta mbara igwe ma mejupụta okomoko okirikiri.
N'ime, m gosi ihe Lọ nke gosipụtara omume, nke Nnukwu Ulo Nnukwu del Rey, Osisi Ndị Agha. Halllọ Nzukọ nke Ngosi bụ mita 73 ogologo ma nwee enyo 357 nke nha dị iche n'etiti windo 17 na-ele anya n'ubi ahụ. Ebe a bịanyere aka na Nkwekọrịta nke Versailles na 1919. The Gallery of Battles sitere na 1678 na mgbidi ahụ kpuchiri marble, ngwá agha na trophies. Ke akpatre, ubet Akwa Edidem emi enyene ubet itiaba man ẹdinọ edinam.
E wezụga na-eje ije n'etiti nnukwu steepụ na dara oké ọnụ lounges, ihe na-amasị m karịsịa bụ ulo nke ndi nwe ulo. Nta, dịkwuo nso, mmadụ nwere ike iche n'echiche ndụ kwa ụbọchị n'ebe ahụ. N'ezie, saịtị ahụ dị ebube site na ebe ị na-ele ya na ọkwa dị oke ọnụ ka, rue taa, ọ dị ka ọ karịrị akarị.
Ọbịbịa ahụ mere ka ike gwụ gị, maka oge ị na-eje ije, mana ọ bara uru. Amaghị m ma ọ bụrụ na ị gara na Versailles karịa otu oge na ndụ gị, mana ị gaghị echefu otu. Nwere ike ịchọtakwu ihe na saịtị gọọmentị nke ụlọ eze iji mara ihe omume pụrụ iche, ego, ebe enwere WiFi na ụdị ihe ahụ. Weebụsaịtị zuru oke.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Paris » Gaa na Obí nke Versailles